Soo dejisan Mixcraft 9.0.442 – Vessoft
Qeybta: Abuurista muusikada
Bogga rasmiga ah: Mixcraft
Mixcraft – software ah si ay u abuuraan oo ka arrinsashada ka Hababka music kala duwan. software waxa uu leeyahay ururinta weyn ee saamaynta dhawaaqa, baarka iyo qalab dalwaddii. Mixcraft kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan ugu remixes oo tayo sare leh, qaban ka qodan iyo hanashada of tracks. software The waa inay awoodaan inay edit faylasha video ku daray saamaynta kala duwan oo gudbayo siman u dhexeeya clips video. Mixcraft awood si ay u qoraan dhawaaqa ka soo qalab xiran dibadda. Sidoo kale software kuu ogolaanayaa inaad soo bixi set dheeraadka ah ee saamaynta dhawaaqa.
fursadaha debecsan of control codka
qalab iyo saamaynta badan oo
Dhexgalo iyo hanashada
maktabadda badan oo dhawaaq
Soo dejisan Mixcraft
Faallo ku saabsan Mixcraft
Mixcraft Xirfadaha la xiriira